I-AUKEY yazisa ngetshaja ezintlanu ezitsha ngeDynamic Detect | Iindaba zeGajethi
I-AUKEY yenye yezona zinto zaziwayo kwibhetri okanye kwitshaja. Banoluhlu olubanzi lweetshaja, eziyilelwe ukuba zisebenze ngakumbi kwaye zibize izixhobo zethu ngeyona ndlela ikhululekileyo. Inkampani ngoku iveza uluhlu olutsha lweetshaja ezifanelekileyo, ezijolise ekubeni zisetyenziswe kwiselfowuni okanye kwilaptop.
Zizonke iitshaja ezintlanu zibonakalisiwe kolu luhlu lwe-AUKEY. Bonke Sebenzisa itekhnoloji yeDynamic Detect. Ndiyabulela kuyo, ifunyenwe xa kukho isixhobo esixhunyiwe okanye xa kukho ezimbini, ukuvumela amandla kwitshaja ukuba yabelwe phakathi kwezi zimbini. Yiyo loo nto intlawulo efanelekileyo ifunyanwa.
1 I-AUKEY USB C yeNtshaja ngeDynamic Detect
2 I-AUKEY USB C Itshaja ngokuHanjiswa kwaMandla i-3.0 kunye neDynamic Detect
3 AUKEY USB C itshaja 60W
4 AUKEY USB C itshaja kunye GAN
5 AUKEY USB C itshaja 60W
I-AUKEY USB C yeNtshaja ngeDynamic Detect
Imodeli yokuqala yile tshaja yentsimbi yodonga, evumela umthwalo we-30W. Iya kusetyenziswa ngeefowuni ezifanelekileyo okanye iilaptops. Le tshaja inayo ngemveliso esemgangathweni ye-USB kunye nokuHanjiswa kwaMandla kwe-3.0 yokutshaja izixhobo ze-USB-C kunye ne-USB. Ukongeza, sinokusebenzisa amazibuko amabini ngaxeshanye, ukuvumela nakweli tyala ukuba isixhobo sihlawuliswe ngamandla e-18W.
Ndiyabulela kuyo, kunokwenzeka ukuba ukonwabele ukubiza ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Ukongeza, iyahambelana nokukhetha okukhulu kweefowuni eziphathwayo kwintengiso. Le tshaja ye-AUKEY yi itshaja encinci, ekhanyayo kunye necompact, esinokuzisebenzisa ekhaya, kodwa sithathe nathi xa usiya eholideyini ngalo lonke ixesha. Kulula ukuthutha
Le tshaja ye-AUKEY inokuba yiyo thenga ngexabiso le-30,99 euro kwiAmazon, Akukho mveliso ifunyenweyo.
I-AUKEY USB C Itshaja ngokuHanjiswa kwaMandla i-3.0 kunye neDynamic Detect
Itshaja yesibini iyafana nemodeli yangaphambili. Kule meko unayo amazibuko amabini e-USB-C, eziya kusivumela ukuba sihlawulise zonke iintlobo zezixhobo, ezinje ngeefowuni. Olunye uncedo kukuba iyahambelana noluhlu olukhulu lweefowuni, ukusuka kwiimodeli ze-Android ukuya kwiimodeli ze-iPhone. Le tshaja inika amandla angama-36W.
Enkosi ngokufanayo singabiza izixhobo ezimbini ngaxeshanye, eya kwenza amandla abe yi-18W kule meko. Iseyindlela elungileyo yokutshaja isixhobo ngokukhawuleza okukhulu. Ukongeza, ekubeni sincinci kwaye sinobunzima obuncinci, sinokuhlala siyithatha nathi, nokuba kungokusebenza okanye ukuhamba. Ndikhululekile kakhulu malunga noku.
Le modeli yoluhlu olutsha lweeshaja ze-AUKEY, sinako Akukho mveliso ifunyenweyo.
AUKEY USB C itshaja 60W
Itshaja yesithathu kolu luhlu lutsha luvela kwi-AUKEY unamandla Itshaja ye-USB. Iza ne-USB esemgangathweni kunye nokuhanjiswa kwamandla kwe3.0 kwaye yenzelwe ukubiza izixhobo ze-USB-C kunye ne-USB ngendlela efanelekileyo. Ngale tshaja sinokufumana intlawulo engama-60W, enokusetyenziselwa kwizibuko le-USB-C ngalo lonke ixesha. Kwimeko yokufuna ukubiza izixhobo ezimbini ngaxeshanye, sinako ukusebenzisa Ukuhanjiswa kwamandla kwe-45W xa usebenzisa zombini amazibuko ngaxeshanye.
Yiyo icwecwe, ayisindi kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa, njengoko sibona kolu luhlu lwenkampani. Ivumela ukuba ihlale isiwa naphi na apho sifuna khona nathi. Kwakhona le tshaja Inesixhobo sokusonga esenza ukuba ibe luncedo kwaye iphatheke. Iluncedo lokutshaja ekhaya, eofisini okanye ekuhambeni.
Singayithenga ngoku kwiAmazon, Akukho mveliso ifunyenweyo, ngexabiso le-49,99 euro.
AUKEY USB C itshaja kunye GAN
Itshaja yesine kolu luhlu lwe-AUKEY ime phandle ukuba isetyenziswe la Ubuchwephesha beGaN obuphambili. Obu buchwephesha yinto evumela ukufumana intlawulo ekhawulezayo kakhulu. Ke inokusetyenziswa kwiimodeli ezininzi ezinje IMacBook Pro, i-iPhone XS, i-XS Max, i-XR, iNintendo Shintsha okanye ezinye izixhobo ezihambelana ne-USB-C.
Le tshaja isinika ukufikelela kule ntlawulo ikhawulezayo, ine-60W yamandla, kodwa ngaphandle kobungakanani obukhulu. Ngawo onke amaxesha igcina uyilo oluhambelana kakhulu. Ungahamba nayo naphina, ebhegini, ibhegi okanye ityesi. Ukongeza, yenzelwe ngendlela ethintela izixhobo ekuzobeni uninzi lwangoku okanye ukubathintela ekubeni babe nobushushu ngexesha lokutshaja.
Ixabiso layo liqhelekile Ixabiso le-42,99 euro. Nangona okwangoku inokuthengwa kwiAmazon nge-euro ezingama-34,99 kuphela, Akukho mveliso ifunyenweyo.
Le tshaja yesihlanu kunokwenzeka ukuba yile imodeli ephezulu kolu luhlu ukusuka ku-AUKEY. Yitshaja enamandla e-60W, kwaye inezibuko ezimbini ze-USB-C. Ke singabiza izixhobo ezimbini ezihambelanayo ngaxeshanye, nokuba ziifowuni okanye iilaptops. Uncedo olukhulu olusinika lona kukuba sinokuhlawulisa ilaptop kunye nefowuni ngaxeshanye, kodwa ngaphandle kokuchaphazeleka okanye ukutshaja kancinci.
Uyilo oluhambelanayo Esikubonayo kolu luhlu isekhona kuyo. Ke ithiwe thsuphu njengenketho enkulu xa usiya nayo. Ikhaphukhaphu, encinci ngobukhulu kwaye inamandla. Ngaphandle kokukhuseleka kakhulu, ukunqanda ubushushu okanye ukugqitha okwangoku.
Le tshaja iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-59,99 kwiAmazon, Akukho mveliso ifunyenweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » I-AUKEY ibeka iitshaja ezintlanu zeselfowuni kunye neelaptop